'कति गर्मी हो!' मोटरसाइकलमा ब्रेक हानेर हामीले कुराकानीको पर्दा उघार्यौ।
गर्मीको प्रसंग निकालेपछि उनीहरुले हामीलाई 'कहाँबाट आएको' भनेर सोधे। मधेस ठाउँमा गर्मीमाथि टिप्पणी गर्ने पक्कै स्थानीय होइनन् भन्ने उनीहरुले सजिलै अनुमान लगाए।
यही मंगलबार सिर्सिया पुलमा भेट्दा हामीले उनीहरुलाई नेपाली भाषामै प्रश्न सोधेका थियौँ। उनीहरु केही बेर 'अवाक्' भए। मुखामुख गरेर हाँसे। प्रश्न बुझे, तर जवाफ फर्काउन सकेनन्। भोजपुरी हामी नबुझ्ने, नेपाली उनीहरु। हामीले टुटेफुटे हिन्दीको सहारा लिँदै उनीहरुको दकस मेट्न खोज्यौं।
'चुनावमा कुन पार्टीलाई भोट दिनुहुन्छ?'
एकछिनमा उनले सहजतासाथ जवाफ थिए, 'बेटाको पूछे के देंगे।'
वीरगन्जको मुख्य बजार पस्ने मुरली बस्तीमा एउटी महिलाले नाम सोध्दा जवाफमा भनेकी थिइन्, 'हमार पतिको नाम सलिम अन्सारी।'
हामी उस्तै प्रश्न लिएर वीरगन्जका गल्ली-गल्ली पसेका थियौं। बाक्लो बस्ती रहेको वडा नं १६ को इटहरामा सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्न खोज्दा ठाकुरराम क्याम्पस पढ्ने बलिराम शर्माले जवाफ फर्काए, 'यहाँ कसैले तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिने छैन।'
'यो ठाउँबाट अहिलेसम्म भोट एक छाप छ। अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा पनि त्यस्तै भयो,' उनले भने, 'दलका उम्मेदवारसँग गाउँको माग पूरा गर्ने समझदारीबिना यहाँबाट भोट जाँदैन।'
हामी रिपोर्टिङकै क्रममा वीरगन्ज-१ स्थित झन्डै २२ घर भएको डोम बस्ती पुग्यौं। उनीहरुको टोलको सीमा पानी तान्ने कलले निर्धारण गरेको थियो। हामीले टोलमा कति घर छन् भनेर सोधेपछि नन्दकिशोर मल्लिक अगाडि आए। '२०/२२ परिवार होला। एउटा घरमा ७/८ जना छन्,' उनले औंलाको इसारामा देखाउँदै भने, 'त्यो कलबाट यता हाम्रो जातिको बसाइ छ।'
मल्लिकले मतदानका लागि सर्त राखेका छन्- 'रोजगार ग्यारेन्टी गर्ने मान्छे चाहियो।'
यो टोलमा पनि 'कसलाई भोट दिने' भनेर सोध्दा महिलाहरु आपसमा कानेखुसी गर्थे। एकले अर्कोलाई 'किसको भोट देबे?' भनेर सल्लाह माग्थे।
'मेरो नाम पनि मनोज हो नि!' मेरो जवाफ सुनेलगत्तै उनी हाँसे र भने, 'मीतज्यू।'
'मुस्लिमले गर्छ कि भनेर भोट हाल्यो गर्दैन, कांग्रेसले त झन् केही गर्दै गरेन,' उनको रोष दलपिच्छे खनिँदै गयो। भने, 'दु:ख भोगेको मान्छे मेयर हुने अवस्था छैन।'
'नैतिकताभन्दा यहाँ पैसाको लडाइँ छ,' आलम भन्छन्, 'यसपालि वीरगन्जको तकदिरमा के छ हेरौँ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३१, २०७४, ११:४२:१४